Talooyin ku saabsan Open Spotify
Spotify waa database a kala duwan music ballaaran oo uu qaaday geeyo music arrin dhab ah. Waxay leeyihiin ururinta wayn ee raad ah oo tiro badan oo ka mid ah fannaaniinta noocyo kala duwan oo ku sifayn. Tani codsiga / madal ayaa lagu amaanay ballaadhan oo uu leeyahay tiro weyn ee isticmaala. Tirada diiwaangashan account waa la tixgelin karaa caddeyn ah ee ay guusha. Laakiin tan iyo markii aan wax walba waa qumman yahay, Spotify ayaa la sheegay in ay kala kulmaan qaar ka mid farsamo (arrin joogto ah).
Qoraalka soo socda diiradda oo ka mid ah arrimaha marar badan soo wajahay iyo qaar ka mid ah xalka dhibaatooyinka kuwa.
Qaybta 1.Login arrinta la Facebook
Qaybta 2.Spotify bidbidayaan
Qaybta 3.Account arrinta ku Spotify
Qaybta 4.Spotify waa in hab offline
Arrimaha Qaybta 5.Spotify playlist
Qaybta 6.Unable si hagaagsan offline playlists
Macmiilka Qaybta 7.Spotify Web (ciyaaryahan) arrimaha
1.Login arrinta la Facebook
Spotify waa codsi saddexaad xisbiga Facebook, sidaas waxay u baahan tahay ogolaanshaha si ay u helaan faahfaahinta iyo isticmaali xisaabta. Mararka, users xannibi codsiga on Facebook, oo si adeegyada Spotify uma isticmaali karo xisaabta Facebook ee login ilaa rukhsadda ah waxaa la siiyaa.
Xalka: Soo gal in aad xisaabta Facebook, oo furo gaarka ah dejinta (geeska midig daadiyaa menu). Laga soo bilaabo Apps iyo website qaybta, u tag xaalkaa dejinta, dooro Spotify oo guji 'tubada' in la ogolaado helitaanka macluumaadka. Ka dibna waxaad ku wanaagsan yihiin in ay tagaan.
Spotify ayaa la sheegay in ay si joogta ah u burburi, laakiin ha ka welwelin talaabooyinka soo socda ayaa kaa caawin kara xalliyo arrinta.
Oo dhan faylka khasnado iyo nidaamka Spotify ka saar qalabka.
Download oo mar kale soo dajiyo codsiga
Haddii ay dhibaatada sii socoto fadlan xaqiijiyo version ee codsiga iyo kala bixiyc waafaqsan. Sidoo kale, si loo hubiyo in qalabka uu leeyahay boos lacag la'aan ah oo ku filan iyo RAM si ay u taageeraan load codsiga.
Arrinta 3.Account on Spotify
Haddii aad la kulanto dhibaato la account Spotify ah, in aad bixisay ee koontada lacagta caymiska, laakiin ma heli karaan adeegga, fadlan hubi soo socda
Mararka adeegyada ay qaataan waqti si aad u cusboonaysiiso diiwaanka. Sug markii qaar ka mid ah oo isku day mar kale.
Fadlan hubi akoonka aad u diiwaan gashan. Waxaa laga yaabaa, in aad leedahay xisaabta xor ma ka xisaab email aad, halka xubnaha waxaa heshiiska ku login Facebook ah. Fadlan nusasaace faahfaahinta xisaabta iyo macaamil ganacsi ..
Mararka qaar ka mid ah adeegyada aan u taraynin meelaha qaarkood, taas oo macnaheedu yahay in inkastoo aad tahay xubin ka diiwaan gashan, laakiin aad ka hawlgala qaar ka mid ah gobolka juquraafi kale ee ay adeegyada kuwa aan la heli karin. Fadlan hubi adeegyada la heli karaa si loogu isticmaalo.
4.Spotify waa in hab offline
Marka aad isticmaali codsiga aad, waqtiyo aan u hagaagsan karaa raadkaagu ama dhageyso heeso cusub oo dheeraad ah. Tani waxay noqon kartaa sababtoo ah waxaad u isticmaala offline ah.
Si aad u isticmaasho adeegyada loo xaqiijiyo in aad gayso habka online. Haddii codsiga weli sii joogo in hab offline ah, hubi xiriir shabakada. Goynta iyo dib daarin laga yaabaa in lagu xalliyo arrinta. Haddii ay dhibaatada sii socoto, uninstall codsiga oo dib qalabka.
5.Spotify arrimaha playlist
Mararka waxaa laga yaabaa inaad awoodi waayeen in ay helaan playlists ama raad ku aadan si fiican u ciyaaro. Isticmaalayaasha ayaa sidoo kale sheegay dhibaatooyin sida ay awoodi waayaan inay u boodboodaan kuwan raadkaygay ama la beddelo mid ka mid playlist in kale. Tan waxaa laga yaabaa in la yaqaan iyo Dicumintiyo ama waxay noqon kartaa sababtoo ah qaladaad xirka nidaamka ah.
6.Unable si hagaagsan offline playlists
Mararka qaarkood dadka isticmaala aan awoodin in ay u hagaagsan offline playlists qalabka ay. Waxaa jira qaar ka mid ah sababaha taas:
Device in hab offline (ma internet firfircoon)
Device ka maqan meel ku filan oo lacag la'aan ah looga baahan yahay in uu kaydiyo faylasha
User ayaa ku guulaystay 3.333 songs per xadka qalab.
Macmiilka 7.Spotify Web (ciyaaryahan) arrimaha
Users Spotify oo ku raaxaysan adeegyada ay ka badan desktops ama laptops, ayaa isticmaala adeegga isticmaalaya macaamiisha webka (ciyaartoyda music) ah. Laakiin mararka qaar waa kuwa aan awoodin inay isticmaalaan adeegga sababo gaar ah. Playlists The music ha u cusbooneysiin, files ay deegaanka u hagaagsan in codsiga, ama ay awoodi waayaan inay helaan shabakad Spotify ah.
Si loo hubiyo in aadan la kulmaan dhibaato oo kale fadlan hubi:
1. cookies ayaa badbaadin kara in qalabka iyo deeqda brannmur helaan shabakad Spotify ah.
2. Waxaad ku leedahay xiriir network caafimaad.
Shuruudaha System 3. waxaa lagu aaddiyaa version of codsiga
4. ciyaaryahanka waxa uu leeyahay xuquuq sharci ah si ay u helaan adeegyada Spotify
Haddii ay dhibaatada sii socoto, isku day reinstalling codsiga oo ay ka saareen faylasha rakibo jir ah oo macmiilka.
Kuwani waa qaar ka mid ah dhibaatooyin joogto ah u wajahay Spotify. Kooxda Spotify ayaa la xaliyo dhibaatooyinka si ay u bixiyaan in la sii wado si ay macaamiishooda iyo in la hubiyo ku qanacsan tahay si ay u ilaaliyaan oo ay ganacsi ee suuqa. Arrimaha kor ku xusan iyo xal ay baahisey ayaa ka caawiyay users badan. Laakiin dhibaatooyinka karaa ama aan islahayn kala bixiyc, fadlan u falanqeeyaan arrinka soco sida.
> Resource > Spotify > Talooyin ku saabsan Open Spotify - Arrimaha